Nhau - Mavharuvhu ekumanikidza kwakanyanya hydrogenation system
Mavharuvhu ekumanikidza kwakanyanya hydrogenation system
Hydrogenation tekinoroji ye petroleum inzira yakakosha muzvigadzirwa zve petroleum, yakagadziridzwa uye inorema kugadzira mafuta. Izvo hazvisi chete zvinogona kuvandudza kudzika kwechipiri maitiro eoli isina kuchena uye nehuremu hwechiedza chemagetsi hydrocarbon, asi zvakare kuwedzera mhando yemafuta emafuta uye nekudzora kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Naizvozvo, kurapa kwemvura, kutsemuka kwehydro kana Residue hydro kurapa uye imwe hydrogenation system yave chinhu chakakosha cheyunifomu. Hydrogenation Unit iri munjodzi yemoto kirasi A, ndiwo makuru ehunyanzvi maficha ari akanyanya tembiricha, yakanyanya kumanikidza, hydrogen kugadzirisa. Hydrogenation yakakwira kumanikidza mavharuvhu ndeaya: hunyanzvi hwetekinoroji, yakasimba zvido zvemhando yepamusoro, kuchengetedzeka uye kuvimbika.
Mavharuvhu eiyo yakanyanya kumanikidza hydrogenation ane anotevera maitiro, kuwedzera kune mashandiro eakajairika mavharuvhu:
Inobvisa kutiza kwekubuda kwepakati kuti ive nesimbiso yekuita kwevhavha, iyo yekubatanidza mhando yemuviri nehunde inoiswa kumanikidziro akaiswa chisimbiso, uye bhoneti, yekuisa chisimbiso mhete uye ina-element mhete, nezvimwe zvinoverengerwa zvakazara maererano EN 12516-2 kusvika dzivisa kubuda.
Mutumbi une ongororo yekushushikana pasi pechikamu chekushanda neANSYS yekuongorora software, uye kona yenzvimbo yekumanikidza inoitiswa ongororo yeiyo firimu kuti ive nechokwadi chekushanduka kwemuviri, kuitira kudzivirira kubuda kwemukati.
Iko kurongedza kwakachena graphite (yakachena kabhoni zvemukati ≥95%) uye inopindirana isina simbi yakarukwa graphite mhete kubva kuUS GARLOCK Kambani. Kuwanda kweiyo pre-yakaumbwa graphite mhete ndeye 1120kg / m3. Uye zvese kurongedza zvine ngura inhibitor. Zvemukati mesefa kugona chloride iri <100ppm mune ine zvinonamatira, zvinodzora uye zvimwe zvinowedzera, kuitira kudzivirira ngura yeiyo stem neCI uye kutiza kwekubuda kwepakati.
Iyo yekukanda nzira yekumanikidza zvikamu zviri pahwaro hweiyo yekukanda nzira yekuongorora kutevedzera, iyo iine 100% isiri-inoparadza kuyedza. Iyo semi-yakapera chigadzirwa yeiyo castings inoenderana nezvinodiwa zvepamusoro-tembiricha uye yakakwira-kumanikidza hydrogenation mavharuvhu; Machining uye gungano zvakanyatso simbisa iko kugadzirisa uye gungano maitiro.
Saizi 2 "~ 24"
Kuyera Kirasi 600 ~ Kirasi 2500
Dhizaini dhizaini API 600, API 6D, BS 1873, ASME B16.34
Kwayedza & kuongorora API 598, API 6D, ISO 5208, ISO 14313, BS 5146
Zvishandiso zvemuviri Carbon Simbi, Stainless Simbi, chiwanikwa Simbi, Duplex Simbi
Kushanda Ruoko vhiri, Gear, mota, Pneumatic
Tarira: Saizi yeiyo serial vharuvhu inobatanidza flange inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.